बुधबार, साउन १३, २०७८ ०४:२१:२३ युनिकोड
मंगलबार, असार २९, २०७८ Dhading Sanchar
सरकारले आजदेखि ७७ वटै जिल्लामा कोरोना भाइरसविरुद्धको खोपको पहिलो मात्रा लगाउन सुरु गरेको छ । चीनबाट आएको भेरोसेल र अमेरिकाबाट आएको जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोप आजदेखि लगाउन सुरु गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । भेरोसेल र जोन्सन एन्ड जोन्सनको खोपका लागि लक्षित समूह छुट्याइएको छ ।
भेरोसेल ५५ वर्ष र माथिको उमेर समूहका सबै नागरिकलाई लगाइनेछ । सोमबारमात्रै नेपाल आइपुगेको १५ लाख जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप ५० देखि ५४ वर्ष उमेर समूहका सबै नागरिक, पूर्ण र अति अशक्त अपाङ्गता भएका नागरिक र नेपालमा बसोबास गरिरहेका शरणार्थीलाई लगाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जोनसन खोपको मात्रा एक पटक मात्र दिए पुग्छ। स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी तथा सरसफाइकर्मी र यसअघिको अभियानहरूमा खोप लगाउन छुट भएका सबै जनालाई खोप लगाउने मन्त्रालयले जनाएको छ । यसै सन्दर्भमा धादिङमा ‘भेरोसेल’ र ‘जान्सिन’ खोप कहिलेबाट सुरु हुदैछ त ? खोप अभियानको बारे स्वास्थ्य कार्यालय धादिङका प्रमुख डा.भुवन पौडेलसँग गरीएको कुराकानीः
आजबाट भेरोसेल र जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप लगाउने भनिएको छ, धादिङमा यो अभियान कहिलेबाट सुरु हुदैछ ?
धादिङमा हामिले खोप अभियान माघ १४ देखि विभिन्न चरणमा संचालन गर्दै आएका थियौँ । यही असार २१ गते पनि एउटा अभियान संचालन गर्यौ, करिब ५ हजार जनालाई खोप दियौँ । हिजो पनि केन्द्रमा खोप प्राप्त भएको कुरा आएको छ र हिजो नै स्वास्थ्य सेवा विभाग केन्द्रले निर्णय गरेको छ, ५० वर्ष भन्दा माथिका व्यक्तिहरुलाइ खोप लगाउने जसमा ५० देखि ५४ वर्षकोलाई जोन्सन एण्ड जोन्सन र ५५ देखि ६० वर्ष सम्म्को लाइ भेरोसेल खोप लगाउने भनेर घोषणा गरिसकेको छ ।
धेरै न्युजहरुमा आज देखि लगाउने भनेर कुरा आएको छ तर धादिङको सन्दर्भमा खोप आइसकेको छैन । सरकारले अहिले जुन ५० वर्ष देखि माथिकालाई लगाउने भनेको खोप र ५५ देखि माथिकालाई लगाउने भनेको खोप जिल्लामा आइसकेको छैन । काठमाडौँमा आज देखि सुरु होला जहाँ तत्काल खोप पु¥याउन सकिन्छ । जस्तो अब धादिङमा आयो भने हामीले त्यो खोप दुर्गम ठाउँहरुमा पनि पु¥याउनु पर्छ । हामीलाइ दुई तिन दिनको समय खोप पु¥याउन लाग्छ ।
तत्काल हामीलाइ खोप प्राप्त हुना साथ खोप लगाउने अभियान संचालन गर्छौ । आजको दिनसम्म थप खोपहरु प्राप्त हुनसकेको छैन । हामीसँग मौजाद खोप नरहेको जानकारी गराउछु । खोप तत्काल आएपछि खोप उपलब्धताको आधारमा कति खोप हामीलाई प्राप्त हुन्छ त्यही अनुसार जनसंख्याको आधारमा हामी स्थानिय तहहरुलाई उपलब्ध गराउछौ । हाम्रा सम्पुर्ण ५२ वटा स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट हरेक नागरिकलाइ खोप पु¥याउनको लागि राज्यको निति अनुसार खोप पु¥याउन प्रयास गरिरहन्छौ । सबै भन्दा ठूलो कुरा हामीलाइ खोप कति प्राप्त हुन्छ ।
मागको आधारमा भन्दा पनि उहाँहरुले निर्धारण गरेर पठाइराख्नु भएको अवस्था छ । किनभने जिल्लामा धेरै खोपको माग छ । सबैको माग पु¥याउन सक्ने अवस्था छैन । अब ५० वर्ष माथिका भन्दा पनि सरकारले सबैलाइ पु¥याउन नसक्न सक्छ । विभिन्न चरणहरुमा पुराउन सक्छ । अब शिक्षकहरुलाई पनि लगाउने भनिएको छ । धेरै शिक्षकहरुको माग थियो । परिक्षाहरु संचालन गरिने भएको छ । समयमै खोप प्राप्त भयो भने उहाँहरुलाई पनि हामीले यसमा समावेश गर्न सक्छौ ।
खोप अभियान आजदेखि सुरु भयो भनेर समचारतिर पनि आएको छ,सबै जना खोप लगाउनको लागि उत्सुक्ता, कौतुहलता भएका छन् ।
आज धादिङमा खोप आएको छैन । खोप शाखासँग कुरा गरेपछि उँहाले आज या भोलि धादिङमा खोप आउने उँहाहरुको प्लान रहेछ । अब भोलिसम्ममा खोप आयो भने सम्बन्धित ठाउँमा पु¥याउन एक दुई दिन लाग्छ । त्यसपछि मात्रै खोप अभियान सुरु हुन्छ । साउनको दुई तिन गते तिर बाट धादिङमा संचालन गर्न सक्छौ ।
जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप एक डोज मात्र लगाउदा हुन्छ भनिएको छ, भेरोसेल दृई मात्रा लगाउनु पर्ने छ,हामीले कस्ता व्यक्तिलाइ जोन्सन एण्ड जोन्सन र कस्ता व्यक्तिलाइ भेरोसेल दिन खोजेका छौँ ? प्रभावकारीता कस्तो हो ?
खोपको बारेमा के भनिएको छ भने ५० देखि ५४ वर्षको मानिसहरुलाई जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप लगाउन भनिएको छ र ५५ देखि माथिका मानिसहरुलाइ भेरोसेल लगाउनु भनेर निणर्य आएको छ । अरु लक्षित वर्ग शिक्षकहरुलाइ पनि लगाउन भनिएको छ । हामीले त्यही अनुसार गर्छौ । खोप चेन्ज पनि हुन सक्छ अहिले जनसंख्यालाई निर्धारण गर्नको लागि एउटै खोप सकिएला भनेर सरकारले यो किसिमको निर्णय बनाएको हुनसक्छ ।
खोपको अवस्था अनुसार चेन्ज गर्नै नमिल्ने होइन पक्कै पनि मिल्छ होला । यी दुई खोपहरु एकै प्रकृती जस्ता छन् । दुबैलाइ २ देखि ८ डिग्री सेन्टिगे्रटमा राख्न मिल्ने छ । जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप पाँच डोज बराबर एक डोजको आउँछ भन्ने सुनिएको छ । यीनीहरुको व्यवस्थापन एउटै किसिमले गर्नुपर्ने भएको हुनाले सजिलो छ ।
विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा रुवीभ्याली, लापा, सेर्तुङ तिर पठाउँदा पनि दुई देखि ८ डिग्री मेनटेन गरेर पु¥याउनु पर्ने हुन्छ । यो भ्याक्सिन पनि त्यही टेम्प्रेचरमा पु¥याउनु पर्ने भएकोले जुन विद्यमान संरचना छ । मौसमले साथ दिएन भने माथि पु¥याउन अलिकति अपठ्यारो हुन्छ । मौसम सुधार भयो भने सहज हुन्छ । यसघिको खोप पनि राम्रो किसिमले संचालन भएको थियो । जोन्सन एण्ड जोन्सनको खोप एक डोज हो र अर्को चाँही एक महिनाको फरकमा २ डोज दिनु पर्छ भनिएको छ ।
खोप लगाएपछि संक्रमित व्यक्ति विरामी हुने भएको कारण खोपको माग पनि जिल्लामा बढि छ । सुरुका दिनहरुमा खोपप्रति जनताहरु त्यति उत्साहित हुनुभएको थिएन । तर अहिलेका दिनमा खोप प्रति धेरै चासो बढेको छ । सरकारले पनि हामी स्वास्थ्यकर्मीहरु अथवा व्यवस्थापनमा खटिनेहरुलाइ नियमित खोप आउन सक्यो भने हामी पनि जनतालाइ दिन आतुर छौ । यसको प्रतिक्षा गरौ र यसको धेरै भिडभाड गर्नुभन्दा पनि सरकारले सबैलाइ एकै चोटि भनेको छैन ५० वर्ष देखि माथिकालाई तोकेको छ ।
सरकारले पनि के सोचेको छ भनि आउने खोपले ५० वर्ष माथिका जनसंख्यालाइ पुग्छ भन्ने किसिमले व्यवस्थापन गरेको छ । खोप ढिलो चाडो सबैले पाइन्छ भिड गर्नुको आवश्यक छैन । स्वास्थ्य चौकिमा जादा वार्डहरुमा टोली छुटाएर लगाउन पर्छ कि भन्ने सोचेका छौ । खोपको उपलब्धता कति हुन्छ विभिन्न चरणमा खोप आउला अब कुन चरणमा जति आउछ त्यसलाई हामीले तत्कालै सकाउनु पर्छ,स्टोरेजको समस्या छ ।
धादिङका नागरीकहरुलाई स्वास्थ्य सजग्ताका हिसावले के भन्न चाहनु हुन्छ ?
हामी अझै पनि कारोना महमारी मै छौ । फेरि तेस्रो लहरको कुराहरु आएको छ । धादिङमा पनि संख्या बढिरहेको छ । रोगको नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्यका मापदण्ड हरु पालना गर्नु पर्ने कुराहरु अपनाउन अनुरोध गर्दछु । सरकारले उपलब्ध गराएको खोप अभियानमा पनि सबै नागरीकहरु समावेश हुनको लागि अनुरोध गर्छु ।
गाउँघरको लागि पनि खोप उपलब्धताको लागि खोप सुनिश्चतता गर्नेछौ । तपाइहरुले पनि सहयोग गरिराख्नु भएको छ, त्यसमा पनि सहयोग गर्नको लागि अनुरोध गर्दछु,धन्यबाद!
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असार २९, २०७८